Yangu TouchBar-Yangu mitemo, nzira nyowani yekugadzirisa iyo MacBook Pro bar | Ndinobva mac
Pakatanga iyo MacBook Pro modhi neTouch Bar yakabuda muna2016, ruzhinji rwevagadziri rwakakurumidza kutanga kushandisa maapplication avo kuti riwirirane neTouch Bar. Gare gare chikumbiro chakaonekwa, BetterTouchTool, kugadzirisa Apple's keyboard bar uye zvimwe zvakafanana zvinoshandiswa zvaitarisirwa kuoneka pamusika.
Izvi hazvina kuitika, kana neimwe nzira yakakura. Nhasi isu tinoziva kunyorera uko kunokutendera iwe kugadzirisa iyo Kubata Bar, Yangu Kubata-Yangu mitemo, kana kuti zvirinani sekutaura kunoita musimudziri "Ipuratifomu yezvishandiso zvinowedzera-kugadzirisa iyo Kubata Bhawa" pamusoro pekugoverwa kwetsika
Izvo My TouchBar-Yangu mitemo inovimbisa ndeyekuwedzera akateedzana emamwe mabhatani kuApple yekubata bar se: kupenya, mimhanzi inoridza, ruzha, keyboard uye bhatiri. Asi chirongwa ichi hachirambe chakaiswa chisimbiso, kana zvisiri inokutendera iwe kugadzirisa iyo bar neakawanda marongero.
Kugadzirisa iyo yekubata bar inoda kugadzirisa yemukati JSON system faira, iyo kunze kwekunge uine hunyanzvi hwekuronga, handifunge kuti uri kufarira kubata. Mukupesana, sarudzo yeakafanotungamira, BetterTouchTool, inopa graphical interface kutsanangura izvo zvinhu zvebata yekubata.
Nhasi MyTouch-Yangu mitemo, chirongwa chakachengetwa papeji GitHub, y ichiri muchikamu chidiki rakavapo, sezvo paine kukundikana kwehunyanzvi kwakawanda mavhezheni ekutanga, sekufanirwa kuvhura kunyorera nekiyi bhatani. Kunyange zvakadaro, kutanga kuratidzika kwakanaka uye kugadzirisa kweshoko kunotibvumira kufungidzira kuti inogona kupa zvakawanda zvekutaura nezvazvo.
Mukuwedzera Anwendung iri rakavhurika sosi uye nekudaro, vazhinji vanogadzira vanogona kutora mukana weinjini yayo kunatsiridza mashandiro ayo nhasi aripo mubharaki rebasa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Yangu TouchBar-Yangu mirawo, nzira nyowani yekugadzirisa iyo bara paMacBook Pro